प्रतिक्रान्तिको आम दिक्दारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रतिक्रान्तिको आम दिक्दारी
यथास्थिति बदल्ने हुटहुटी नबढ्दासम्म र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध मान्छेमा स्पष्टता नआउँदासम्म दिक्दारी छाइरहन्छ । आम दिक्दारीलाई पुँजीकृत गर्दै शासकहरू आफूअनुकूलको परिस्थितिलाई मजबुत बनाउँछन्, क्रान्तिका उपलब्धि सबै उल्ट्याउन थाल्छन् ।
चैत्र १२, २०७७ उज्ज्वल प्रसाई
नेपालको दलीय राजनीति दलाधीश र उनीहरूका पछिपछि हिँडिरहने केही दर्जन पछुवाबाहेक अरूका लागि दिक्दारी उत्पन्न गर्ने नीरस तमासा भएको छ । चालु दलोद्यममा षड्यन्त्रको प्रचुरता भए पनि रहस्य केही बाँकी छैन । दिक्दारी भावकै कारण हुन सक्छ, आम नागरिकमा सकसपूर्ण यथास्थिति सहने आदत बस्न थालेको छ । दलभित्रका विद्रोहीहरू अतिशय निम्छरा छन् । थिति बदल्ने उद्वेलन बोकेर सहरका गल्ली कुदिरहेका मान्छेको संख्या असाध्यै सानो भएकाले होला, उनीहरूको स्वर विलुप्त छ । भिन्न मुद्दामा उठेका भिन्न आन्दोलनहरू एकअर्कामा अपरिचित टापुझैं एक्लाएक्लै छन् ।
उच्चतम कार्यकारी पदमा बसेर गरेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक निर्णय उल्टिएपछि पनि अनेक षड्यन्त्र गर्ने छुट लिएर अझै प्रधानमन्त्री छन्, केपी ओली । उनै निर्लज्ज ओलीको षड्यन्त्रको मतियार बन्नुलाई सफल राजनीति मानिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवा । दर्जनौं निहत्था मधेसीको आहुतिको बलमा राजनीति गरिरहेका मधेसी नेताहरू आफ्ना माग ओलीबाटै पूरा गराउने र त्यसैका बलमा आगामी निर्वाचन आफ्ना पक्षमा प्रभावित तुल्याउने मोलमोलाइमा छन् । भूराजनीतिका तानाबाना प्रभावी बनिरहेको कथा कुनै नयाँ र सुखद खबर होइन ।
केही साता पहिलेसम्म सगर्व नेकपा (नेकपा) भएका, उत्तिकै गौरवका साथ पूर्वमाओवादीसँगै उभिएर ओलीको प्रतिगमन परास्त गर्ने बताइरहेका माधव नेपाल र घनश्याम भुसालहरूसँग एकाएक ‘खाँट्टी एमाले’ भएको सर्वथा निम्छरो दाबीबाहेक कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन । सर्वोच्च अदालतमार्फत गराइएको एउटा निर्णयले आफ्नो सिंगो राजनीति अर्थहीन बनाएकामा अलमलिएर उत्पन्न भएको विचित्र मनोदशामा छन्, उनीहरू । प्रचण्डसँग नयाँ आन्दोलन आह्वान गर्ने राजनीतिक हैसियत बाँकी छैन । पुनःस्थापित संसद्लाई स्वयं सत्ताधारीको षड्यन्त्र र अन्य दलको अकर्मण्यताले पहिलेभन्दा बढी निकम्मा तुल्याएको छ । संसद् इतरका नेत्रविक्रम चन्दहरूको ‘विप्लवी जटिलता’ चासो राख्नसमेत लायक रहेन । विकल्पको राजनीतिक गफमा कुनै ‘वैकल्पिक ऊर्जा’ नभएको धेरै भइसक्यो ।
यो नीरसता र दिक्दारीको अन्त्य कसरी र कहिले होला ?
ती खराब दिनहरू !
सन् १९६८ को फ्रान्समा आन्दोलनको आँधीबेहरी सडकमा उर्लनुअघि सम्भवतः यस्तै दिक्दारीले आम मान्छे शिथिल भएका थिए । एकातिर उपभोगवादी तमासाको प्रदर्शन जारी थियो !अर्कातिर बेरोजगारी, गरिबी, हीनताभावले आम मान्छेलाई क्लान्त बनाएको थियो । मजदुरका संगठन थिए, तर तिनको प्रतिरोध बलियो बन्न सकेको थिएन । विद्यार्थीहरूमा विद्रोहको ऊर्जा जागृत भएको थिएन । यथास्थितिलाई चुनौतीको औंलो ठड्याउनेहरूको संख्या न्यून थियो । ती सकेसम्म विद्रोहका स–साना फिलिङ्गा खुला आकाशमा उडाइरहन्थे ।
प्रतिरोधी चेतना फैलाउने काममा लागेकामध्ये केही कलाकार एवं चिन्तकहरूले सिचुएसनिस्ट इन्टरनेसनलजस्ता समूह गठन गरे । यस्ता समूहमार्फत कलाका विभिन्न माध्यममा प्रतिरोधी प्रयोग गर्थे, सैद्धान्तिक विमर्श सञ्चालन गर्थे । सिचुएसनिस्ट इन्टरनेसनल गठन गर्नेमध्येका चिन्तक थिए— गी डिबोर्ड र मुस्तफा खयाती । सन् १९६७ मा प्रकाशित डिबोर्डको किताब ‘द सोसाइटी अफ द स्पेक्टेकल’ र खयातीले लेखेको पर्चा ‘अन द पोभर्टी अफ स्टुडेन्ट लाइफ’ नै १९६८ को जनविद्रोहका मुख्य बौद्धिक प्रेरणा मानिन्छन् ।
सन् १९६८ मा विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन देशका अन्य भागमा पनि फैलियो । विद्यार्थीसँग आन्दोलनमा होमिन आम मानिस आए, श्रमिक आए, महिला आए, बेरोजगार युवा आए र आन्दोलनमा उभार थपियो । मे ’६८ लाई धेरैले युवाहरू मात्रको आन्दोलनका रूपमा बुझे पनि त्यसमा विविध तप्काका आम फ्रान्सेलीको सक्रिय सहभागिता थियो ।
विद्रोहताका डिबोर्ड र खयातीका किताबबाट लिइएका उद्धरण पेरिसका पर्खालहरूमा पोतिएका थिए । यी पुस्तक र पर्चा आम मान्छेका हात पर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै यी दुई अभियन्ता आफ्ना नियमित प्रकाशनमा समकालीन समाजबारे समूहका मत व्यक्त गर्थे । सन् १९६२ मा उनीहरूको प्रकाशनमा ‘द ब्याड डेज विल एन्ड’ शीर्षकमा निबन्ध प्रकाशित भयो । उन्नाइसौं शताब्दीको युरोपमा ख्याति कमाएको कुनै गीतको बोललाई शीर्षक बनाएर लेखिएको निबन्ध सम्भवतः डिबोर्डकै थियो । विभिन्न सन्दर्भमा अद्यापि सम्झना गरिने सो निबन्धमा यस्ता दुई वाक्य छन्, ‘बोरडम इज काउन्टर रिभोलुसनरी । इन एभ्री वेज ।’ अर्थात्, दिक्दारी सबै किसिमले प्रतिक्रान्तिकारी हुन्छ ।
डिबोर्ड भन्छन्— बेलाबेला उठ्ने प्रतिरोधका भुल्काहरू जीवित भए पनि यथास्थितिको ठूलो तमासाका कारण ती गौण हुन सक्छन् । हिजोका विद्रोही शक्ति र प्रतिपक्षीहरू भुत्ते र अप्रभावकारी बन्दै गएपछि ती पनि यथास्थितिका सामान्य पुर्जामा परिणत हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन चाहनेहरूमा असन्तुष्टिको बाक्लो तुँवालो छाउँछ । आम मान्छेमा दिक्दारी पैदा हुन्छ । यथास्थिति बदल्ने हुटहुटी नबढ्दासम्म र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध मान्छेमा स्पष्टता नआउँदासम्म दिक्दारी छाइरहन्छ । यही आम दिक्दारीलाई पुँजीकृत गर्दै शासकहरू आफूअनुकूलको परिस्थितिलाई मजबुत बनाउँछन् । हिजो भएका क्रान्तिका उपलब्धि सबै उल्ट्याउन थाल्छन् ।
उहिलेको फ्रान्समा डिबोर्डले देखेको त्यो प्रतिक्रान्तिकारी ‘बोरडम’ अहिले हाम्रो दलीय राजनीतिको दुःखदायी यथार्थ भएको छ । हाललाई कम्तीमा यो आम दिक्दारी चिर्ने कुनै प्रयत्न थाल्न जरुरी छ । नीरस राजनीतिको अन्त्य गर्ने असल सुरुआत नहुँदासम्म हामी सबै दलीय तमासाको दिक्दार उपभोक्ता भइरहन अभिशप्त हुनेछौं ।
टापुहरूबीच बातचित !
नेपालमा पनि प्रतिरोधी राजनीतिका स–साना प्रयत्नहरू नभएका होइनन्, तर ती एकअर्कासँग संवादमा छैनन् । आन्दोलनका भिन्न टापुहरूलाई एकअर्कासँग संवाद गराउने कुनै बौद्धिक प्रयत्न मात्र भए पनि आम दिक्दारी किञ्चित् कम हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो ।
उपत्यकाभित्र खोकना र बुङमतीले ‘विकास’ को सकस बेहोरिरहेका छन् । यी दुई सांस्कृतिक महत्त्वका बस्तीहरूको तेह्र हजार रोपनीमध्ये दस हजार रोपनी जग्गा रोक्का छ । करिब आधा दर्जन विभिन्न ‘ठूला’ विकासका परियोजनाको चपेटामा परेका यी बस्तीका बासिन्दा आन्दोलित छन्, प्रतिरोध गर्ने कोसिसमा छन् । उनीहरूमाझ विभाजन ल्याउने काम सत्ता, बजार र दलीय राजनीतिले गरेको छ । त्यसैले सफल हुन सकेका छैनन्।
उपत्यकामै सडक फराकिलो बनाउने उपक्रमबाट एक लाखभन्दा बढी जनता प्रभावित छन् । कतिपय घरबारविहीन बनाइएका छन् । कतिको रोजगारी गर्ने ठाउँ गुमेको छ । उनीहरू संगठित प्रतिरोध गर्ने यत्नमा लागेका छन् । तर, आपसमा विभाजित छन् । मुआब्जाको मोलमोलाइको प्रभाव छँदै छ, दलीय राजनीतिको प्रभाव पनि उत्तिकै छ । आन्दोलित सडक विस्तारपीडित र खोकनाका प्रतिरोधीबीच आवश्यक सहकार्य हुन सकेको छैन ।
उपत्यकामा सुकुम्बासीको संख्या पनि सानो छैन । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने आशा देखाएको छ, काम गरेको छैन । सुकुम्बासी ओत लागेका छाप्रा भत्काउने उपक्रम भने अहिले पनि जारी छ । उनीहरू संगठित भएर आन्दोलनमा होमिएको धेरै भयो । तर त्यहाँभित्र दलीय विभाजनका दुःखदायी कथा बग्रेल्ती छन् । देशका अन्य भागमा भएका घातका कथा सुनाउने आम सुकुम्बासीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यी सुकुम्बासीका दुःखसँग सडक विस्तारपीडितहरू संवाद गर्न सक्दैनन्, खोकनाका आदिवासीहरू यी सुकुम्बासीका दुःख बुझ्नबाट वञ्चित छन् ।
उपत्यकामै सम्पदा संरक्षणका साना प्रयत्नहरू जारी छन् । कमलपोखरीमा कंक्रिट खडा गर्ने सरकारी दुष्प्रयत्नको विरोधमा सम्पदा संरक्षकहरू आन्दोलित छन् । टुँडिखेलमा सत्ता र सेनाको कब्जा हट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, उपत्यकामा भएका अन्य थुप्रै सम्पदा ‘विकास’ को चपेटामा परेकामा उनीहरू आवाज बुलन्द गराउन चाहन्छन् । तर सम्पदा संरक्षणमा काम गरिरहेकाहरूसँग खोकना संरक्षणका अभियन्ताहरूको आवश्यक संवाद हुन सकिरहेको छैन । सुकुम्बासीसँग बसेर गफ गर्ने सवाल उनीहरूका लागि गौण छ ।
निजगढको जंगल मास्न नदिने प्रयत्नमा लागेकाहरू सानो समूहमा आन्दोलित छन् । तमोर, अरुण र दूधकोशीको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङ किरात समुदायको मुन्धुमी आस्थाको केन्द्र हो । स्टिमर कुदाएर विकास गरेको ढोल पिट्न तम्सेको सरकारले खुवालुङ फुटाउने योजना बनाएको छ । त्यसविरुद्ध सो समुदायका अभियन्ता आन्दोलित छन् । निजगढ र खुवालुङका बीच खास कुनै संवाद छैन ।
उपत्यकाभित्रका भिन्न आन्दोलनहरू, जो एकअर्कासँग सम्बन्धितसमेत छन्, उनीहरू नै एक ठाउँ बसेर गम्भीर विमर्श गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्यत्रका साना प्रयत्नहरूलाई जोड्ने सवाल कसैको प्राथमिकतामा नहुनु सामान्य छ । दलीय राजनीतिको नीरस रस्साकस्सीलाई चिर्न यी भिन्न समूहहरूले एकअर्कासँग संवाद गरेर केही साझा मञ्च खडा गर्न सक्छन् । भूमि, सम्पदा, भाषा र पहिचानजस्ता विषयमा साझा चासो खोज्न सकिने र एकअर्काका विशिष्ट मुद्दामा ऐक्यबद्धता राख्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् ।
यस्तो प्रयत्नले सत्ता, बजार, विकास र समृद्धिका विषयलाई सार्वजनिक विमर्शका विषय मात्र बनाउने थिएन, आम नागरिकलाई यथास्थिति बदल्ने अभियानमा ऐक्यबद्ध हुन सघाउने थियो । यी विषयहरू सोझै राजनीतिसँग जोडिने भएकाले सिंगो राजनीति बदल्ने सामूहिक ऊर्जाको काम गर्ने थियो । निमुखा नागरिकलाई विद्रूप दलीयकरणको घाती जाँतोमा पिसिनबाट बचाउनेतर्फ एक पाइलो अग्रसरता हुन सक्थ्यो ।
त्यसै गरी दलित र महिला आन्दोलन, जनजाति र मधेसी आन्दोलन, श्रमिक र कृषक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमाझ संवादका ढोका खोल्न सकिन्छ । त्यसले संघर्षका साझा अभियानको सम्भावना पहिल्याउन सघाउने थियो ।
अन्त्यमा, २०६२/६३ सालको राजनीतिक उपलब्धिलाई निष्प्राण बनाउने कोसिस सफल हुँदै छ । नेपालको संविधान, २०७२ केवल शक्तिमा हुनेका लागि आफूअनुकूल उपयोग गर्ने सस्तो कमोडिटी भइसकेको छ । अर्थात्, प्रतिक्रान्ति द्रुत छ । दलीयकरणको परिणामस्वरूप राजनीतिप्रति छाएको आम दिक्दारी प्रतिक्रान्तिका लागि सर्वथा अनुकूल छ । सबैभन्दा पहिले आम दिक्दारीविरुद्ध गहकिलो हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७७ १८:३५
पछिल्लो एक दशक पार्टी–काममा दत्तचित्त भएर लाग्दा उसले बुझेको सबैभन्दा ठूलो सत्य एउटै छ— चुनाव जित्न बाहरूको आशीर्वाद, मनग्य पैसा र स्थानीय दलबलको बलियो साथ चाहिन्छ ।
फाल्गुन २८, २०७७ उज्ज्वल प्रसाई
२०६० सालको दशकमा बनेको राजनीतिक कार्यकर्ताको जीवनी यहाँ प्रस्तुत छ । बेनामे कार्यकर्ता नेकपा एमालेसम्बद्ध भए पनि यो लगभग प्रतिनिधि जीवनी हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा अरू मौजुदा दलसम्बद्ध पछिल्लो पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले भोगेको सांगठनिक जीवनको चरित्र उस्तै होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत कथा कुनै दलीय कार्यकर्तासँग बिलकुलै मेल नखाए, तिनका विशिष्टताहरू अध्ययनयोग्य ठहरिनेछन् ।
पहाडबाट मधेस झरेका पर्वते नेपालीभाषी निम्नमध्यम वर्गीय परिवारमा उसको जन्म भयो । सरकारी विद्यालयका शिक्षक आमाबाबुको औसत कमाइ र अलिकति खेतीपाती पनि भएकाले अंग्रेजी माध्यमको निजी विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्‍यो । विद्यालयमा लिइने परीक्षामा औसतभन्दा राम्रो अंक हासिल गरेकाले उच्च शिक्षाका लागि उसको स्वाभाविक छनोट विज्ञान भयो । कक्षा १२ सक्दा–नसक्दै विज्ञान उसको रुचि होइन रहेछ भन्ने पत्तो पायो, व्यवस्थापन संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तर सक्यो । सिप र ज्ञानको ध्याउन्न कम, डिग्री हात पार्ने हतारोमा उसको ध्यान केन्द्रित भयो । टेक्स्टबुक, रेफरेन्स सामग्री, जर्नल वा विषयगत लिखतहरूको खोजी कहिल्यै भएन, गाइड र गेस पेपरका केही थानले गर्जो टर्‍यो । उसको खास रुचिको क्षेत्र व्यवस्थापन हो कि होइन, कहिल्यै निर्क्योल पनि भएन ।
कलेजमा छँदा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका निर्वाचनहरूमा उसलाई थोरै चाख थियो । कलेजमा फारम भर्न, कार्ड हात पार्न र कहिलेकाहीँ छात्रवृत्ति फुत्काउन सहयोग गर्ने नेकपा एमालेको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुका नेताहरू थिए । परीक्षा सकिएपछि बुझाउनुपर्ने थिसिस सस्तैमा जुटाइदिने पनि पार्टीकै साथी थिए । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, आमाबाबु एमाले भएकाले ऊ आफूलाई जन्मजात सूर्य–छापे सम्झन्थ्यो, कलेजका सहयोगीहरू पनि ‘आफ्नै पार्टी’ का फेला परे । स्ववियु चुनावमा पार्टीका मान्छेलाई भोट हाल्न तम्सन्थ्यो, उनीहरूले जिते दंग पर्थ्यो । उसको राजनीतिक चासो यति नै थियो र यही चासो सम्बोधन गर्न आवश्यक राजनीतिक ज्ञान नै उसलाई पर्याप्त थियो ।
महेन्द्र माला पढेर हुर्केका आमाबाबुले त्यहीअनुसारका मूल्यमा लेस बनाएर हुर्काएका थिए उसलाई । ऊ देशलाई त्यसरी नै ‘माया’ गर्थ्यो, जसरी महेन्द्र मालाले सिकाएको थियो । जातले निर्धारण गरेको साँचोबाट अलग हुनुपर्ने खण्ड कहिल्यै आइपरेन । ‘प्रजातन्त्र’ पछि हुर्केको पुस्ता भएकाले खुलापनप्रति किञ्चित् लगाव उसमा थियो तर नेपाली समाजबारे उसको दृष्टिकोणमा पञ्चायती राष्ट्रवाद जब्बर थियो । अघिल्लो पुस्तामा जत्तिकै नहोला तर पितृसत्ताको प्रभाव कम भएको थिएन । अमेरिका वा चीनले झैं देशले आर्थिक प्रगति गरेको देख्न चाहन्थ्यो । ठूला र चिल्ला सडक, गगनचुम्बी भवनहरू भएका झिलीमिली बजार, आधुनिक सुखसुविधाको प्रचुरतासहितको सहर उसले बुझेको विकास थियो ।
परिवार एवं विद्यालयले यस्ता मूल्यमान्यतासहित निर्माण गरिदिएको उसको व्यक्तित्वलाई विश्वविद्यालयले थप मलजल गर्‍यो । ती मान्यतालाई परीक्षणमा राख्ने कुनै मौका दिएन । पढाइ सक्दा उसले बुझेकै विकासको भाष्य बलियो भयो; महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव आएन, जातको साँचोलाई चुनौती दिनुपरेन, दलीय राजनीति भनेको बाहुबल र तामझाम हो भन्ने बुझ्यो । खाडी जानुपर्ने अवस्था थिएन, पश्चिमा मुलुक जाने खासै हिम्मत जुटाएन, काठमाडौंमै खेलोफड्को गर्ने मेसो मिलाउन पनि सकेन ।
ऊ घर फर्किने निर्णयमा पुग्यो । यसरी एउटा ‘शिक्षित’ हिन्दु बाहुन पुरुष शरीरमा उम्दा जोस साँचेर, पाएको जिम्मेवारीमा खटिने जाँगर सँगालेर घर फर्क्यो । हातमा डिग्री छँदै थियो, गाउँ आफ्नै पार्टीको मौजा । पार्टीनिकट साहुहरूका कलेजमा उसले जागिर पायो । दैनिक केही घण्टा जागिर खाने, अरू बेला पार्टीको काम गर्ने— रुटिन तय भयो । राजनीति युवा संगठनबाट सुरु भयो । गर्नु के थियो ? खसीबोका टुर्नामेन्ट, तीज गीत प्रतियोगिता, नाचगान र सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन उत्सव र वाणिज्य महोत्सवका आयोजना, जेसिज र लायन्स क्लबमा कब्जा जमाउने योजना, चुनावका बेला बाइकवाला भेला पार्ने, पेट्रोल र खाजाको व्यवस्थापनमा खट्ने, फेसबुकमा विपक्षीसँग लड्ने, नेताका जन्मदिन पत्तो लगाउने र फोटो सजाएर शुभकामना दिने, जिल्ला र केन्द्रबाट नेता आउँदा अगुवा–पछुवा भएर हिँड्ने ! कहिलेकाहीँ प्रशिक्षण नामका भाषण–पेलान कार्यक्रममा हाई काढ्दै मेचमा बसेर आफ्नै धैर्यको परिक्षण गर्ने । यी सबै सिप सिक्न उसलाई कति समय पनि लागेन ।
करिब जातझैं विरासतमा आएको पार्टीको नेता भएपछि पनि उसले आफूसँगै हुर्काएका कुनै पनि पुराना मान्यताहरू परीक्षणमा राख्नुपरेन । ऊ संलग्न पार्टी कमिटीमा महिला मुक्तिका विषयमा कुनै घनीभूत छलफल चलेन । जात व्यवस्था निर्मूल पार्ने उपाय र आवश्यकताबारे कुनै प्रशिक्षण लिनुपरेन । मधेसी र थारूका मुद्दा के हुन् ? कहिल्यै जान्ने मेसो मिलेन । कोही किन आदिवासी जनजाति भनेर कराइरहेको छ ? कहिल्यै कुनै प्रश्नमा घोत्लिनुपरेन । नेपाली समाजका चरित्रबारे कुनै गम्भीर विमर्शमा कहिल्यै सरिक हुनुपरेन । भारत र चीन जस्ता छन्, ती कसरी त्यस्ता भए भनेर छलफल गर्ने कुनै कार्यक्रम आयोजना भएनन्, न श्रमिक र कृषकका विद्यमान अवस्था बुझ्ने–बुझाउने कुनै उपायको खोजी भयो । स्थानीय नेतासँग जीवनका विविध अर्थ–सामाजिक आयामबारे कहिल्यै कुनै संवाद गर्नुपरेन । तर दैनिकीको उल्लेख्य भाग भने पार्टी कर्ममै बितिरह्यो ।
पार्टीमा खट्दा उसले कण्ठ पारेका केही शब्द र वाक्यांश छन्— जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद, मार्क्स र मदन भण्डारी, माइन्युट र भेला, अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) र केन्द्रको निर्देशन, रेल र पानीजहाज, पृथ्वीनारायण शाह र बलभद्र कुँवर, विकास र समृद्धि, आसन ग्रहण र प्रमुख अतिथि, माल्यार्पण र विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रवाद र लोकतन्त्र ! बस, जिल्ला र केन्द्रका नेतासँग औपचारिक गफ गर्न यति भए पुग्छ । कहिलेकाहीँ भाषण गर्न योभन्दा धेरै केही आवश्यक पर्दैन ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएको साँझ ऊ मान्छे भेला पार्न खटियो, नजिकैको चोकमा मैनबत्ती बाल्नुपर्ने थियो । केही किलोमिटर पर मानिसहरू ब्ल्याक आउट गरेर बसेका थिए । त्यसो किन भएको ? उसलाई चासो थिएन । निर्वाचन नजिकिन थालेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको खबर आइपुग्यो । उसलाई स्थानीय नेताले भने, ‘दुई पार्टी अलग भए पनि हाम्रो जात एउटै हो क्या, कम्युनिस्ट ! हामी मिल्यौं भने पाँच वर्षमै देशमा चमत्कार हुन्छ !’ यसोभन्दा ऊसँग नेतालाई सोध्ने प्रश्न केही थिएन । कम्युनिस्ट पनि जात हो र ? अहँ, उसको दिमागमा प्रश्न फुरेन । नेताकै बोली लिएर ऊ गाउँ डुल्यो, फेसबुक चहार्‍यो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, ऊ अतिरिक्त हर्षित भयो । ओलीको फोटो हेर्दा, ऊभित्र घमन्ड भरभराएर आउँथ्यो । वरपर बजार डुल्दा उसका नाकका पोरा फुल्थे, ज्यान गमक्क पर्थ्यो, पाखुरा यसो उचालिन्थ्यो र पखेटाझैं बन्थ्यो । बोलीमा पनि कताकति ओलीकै टोन चढ्थ्यो । अलि पछि तिनै ओली उसको समेत ‘बा’ बनाइए । बाले तेह्रथुम पुगेर जन्मदिनको ‘यति केक’ काटेर खाए, उसको मुख गुलियो भयो । बाले आफ्ना सेता जुँगा काला हुन थालेको घोषणा गरे, उसले आफ्नै जुँगामा ताउ लगायो । एवंरीतले बाको प्रगतिलाई आफ्नै प्रगति सम्झेर ऊ पार्टीकर्ममा लीन भइरह्यो । तिनै बाले एक दिन अकस्मात् संसद् भंग गरिदिए । ऊ मौन भयो । न ऊसँग प्रश्न थियो, न ठीक–बेठीक सर्लक्क छुट्याउने सामर्थ्य ।
माथिका बाले संसद् भंग गरेकामा उसका स्थानीय बा रिसाए । उसलाई संकट आइलाग्यो— माथिका बाको प्रशंसा गर्ने कि तलका बासँगै आफू पनि रिसाउने ? दोमन भएरै केही दिन बिताएपछि स्थानीय ‘काका’ र ‘मामा’ हरूले दबाब दिए । ऊ पनि बासँग रिसाउने निर्णयमा पुग्यो तर रिसाएर बालाई अरूले जस्तो तानाशाह, हिटलर, फासीवादी भनिहालेन । खासमा कोही कसैलाई फासीवादी किन भन्छ, उसलाई थाहा थिएन । सोच्यो, ‘आखिर बा हुन्, पछि फेरि उनकै शरणमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।’ नभन्दै उसका एक आफन्तलाई माथिका बाले तलको पदीय उपहार घरै पठाइदिए । ऊ अब स्थानीय बाको सिको गरेर रिसाएको स्वाङ पार्न नसक्ने भयो । आफन्तको पदप्राप्तिसँगै उसले खुसी हुने निधो गर्‍यो । त्यही उपलक्ष्यमा चोकमा उभिएर प्रचण्ड र माधवका नाममा दुई/चार प्रचलित गाली फलाक्यो ।
संसद् पुनःस्थापना नभइन्जेल ऊ खुसी थियो, सर्वोच्चको फैसला आएसँगै ऊ मलिन भयो । खुसी हुन पनि सकेन, रिसाइहाल्न पनि गाह्रो पर्‍यो । माथिका बाले केही गर्लान् भन्ने आशा थियो, केही दिन यसै बिते । अनि सर्वोच्च अदालतबाट ‘नेकपा नामको विवाद’ बारे अर्को फैसला झर्‍यो । आफ्नै एमाले फर्केर आयो, ऊ साँच्चै दंग पर्‍यो । फुर्किंदै सञ्जालमा लेख्यो— ‘मै पनि एमाले, सही पनि एमाले !’ बासँग हुन पाइने, एमाले हुँ भन्न पनि पाइने, सूर्य छाप पनि आफ्नै हुने; जबज छँदै छ !
अहिले उसको दिनचर्या शान्तिपूर्ण र उमंगमयी छ । आफ्ना मित्रगणले माधव र झलनाथ पक्षकालाई पार्टीमा फर्केर आएकामा ‘स्वागत’ गरेको हेरेर ऊ मुसुमुसु हाँस्छ । धन्न, आफ्ना क्षेत्रमा धनगढीमा झैं कुटाकुट गर्नुपरेको छैन भनेर ऊ बढी खुसी भएको छ । हिजोका स्थानीय बा फेरि आफ्नै परिवारमा फर्केर आउँदा उस्तै स्थान पाउलान् भन्ने उसको आशा छ । त्यसो गर्दा आगामी चुनाव जित्न केही सजिलो होला भन्ने उसलाई लाग्छ ।
आगामी निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारमा आफ्नै पार्टीको कब्जा हुँदा उसले सोचेका विकासका केही परियोजना सम्पन्न हुन्थे । केही भ्युटावरहरू उठाउन बाँकी नै छन्, मन्दिरहरूमा पर्खाल लगाएकै छैन, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालक समितिका लागि छुट्टै कार्यालय भवन बनाउने सपना पूरा भएको छैन, आफ्नै पार्टीका साथीहरू भएको युवा क्लबमा आठ–दस लाख बजेट पार्न पाउँदा ‘काम गर्न’ सजिलो हुन्थ्यो । एमाले नाम र सूर्य चिह्नका आड नभए चुनाव जित्न र यी सपना पूरा गर्न सकिँदैनथ्यो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उसलाई राहत दिएको छ ।
समय र ‘बा’ हरूले साथ दिँदै गए, केही वर्षमा आफ्नै नगरको प्रमुख वा यस क्षेत्रको सांसद हुने सपना बुन्न थालेको छ उसले । पछिल्लो एक दशक पार्टी–काममा दत्तचित्त भएर लाग्दा उसले बुझेको सबैभन्दा ठूलो सत्य एउटै छ— चुनाव जित्न बाहरूको आशीर्वाद, मनग्य पैसा र स्थानीय दलबलको बलियो साथ चाहिन्छ । अरू केही गडबडी नभए, यी सबै आवश्यकता पूरा गरेर ऊ सफल नेता बन्नेछ । अनि आफ्ना सबै ऊर्जा र सामर्थ्य लगाएर देशको विकास गर्नेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७७ ०८:०३